Ewebata ụkpụrụ ntọala obodo - CAPSI
Na-ewebata ụkpụrụ ntọala obodo
Ezubere klaasị a maka ndị chọrọ ịzụlite nka na iwusi ihe ọmụma ha ike na ngalaba ọrụ enyemaka na itinye ego na ọha na mpaghara Africa. Emebere ya maka ndị na-achọ ka ha bụrụ ndị na-eme mgbanwe na mpaghara a yana maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na-amụ nwa oge maka mmepe ọkachamara.
Masterclass na-enye ndị nnọchiteanya ohere ịga obere klas nke na-elekwasị anya na naanị otu mpaghara mmasị. Ụzọ 'leza' a si amụ ihe dabara ndị ọkachamara na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-enweghị ike ịga ọmụmụ ihe ogologo oge.
Klas nna ukwu a nwere isiokwu asaa ndị a.
1. Ụdị ntọala Community
2. Omume inye onyinye
3. Ịhazi na ijikwa ntọala obodo
4. njikwa ndị otu
5. Otu esi emepụta na mejuputa ihe nlereanya Community Foundation
6. Mmepe obodo
7. Ịchịkọta akụrụngwa
3 750.00 ZAR
A ga-atụgharị gị gaa na ibe ngwa ịntanetị Wits Enterprise. Biko soro ntuziaka ndị e depụtara na ibe ahụ.